Indlela Yokuhlela Ukusebenzisa Amaseva Womculo
Ukubuka okuyisisekelo kokuhlelwa ngamaseva womculo
Indlela engcono kakhulu yokuhlela umculo wakho
Ilabhulali yomculo enezinkulungwane noma izinkulungwane zamaCD ingaba enkulu kakhulu futhi inzima kakhulu ukuhlela nokuphatha. Engeza ama-DVD-A, ama-SACD amarekhodi namarekhodi e-vinyl namateyipu futhi iqoqo likhula likhudlwana. Iseva yomculo ingase ibe yisisombululo esihle kakhulu ekugcineni umculo ohleliwe futhi kutholakale kalula. Lesi sihloko sibukezwa ngamaseva womculo, ukusetshenziswa kwawo nezinzuzo nezibonelo ezimbalwa zezinhlobo zamaseva atholakalayo.
Iyini i-Music Server?
Ukuhlela nokuphatha iqoqo elikhulu lomculo kuwumsebenzi wesiphakeli somculo. Njengoba leli gama libonisa, iseva yomculo 'isebenza' ngomculo ngokufunwa. Iseva yenza kube lula futhi kulula ukufinyelela noma yikuphi umsindo noma iqembu lezintambo uma zihlelwe ngoma ingoma, umculi, uhlobo, uhlu lwadlalwayo, njll. Amaseva omculo avela ezinhlobonhlobo zezinhlobo nezinhlobo, kodwa ngokuvamile anezingxenye ezimbili eziyinhloko; i-CD player ene-hard disk drive unit 'yokuklebhula' nokugcina amafayela womculo kanye nokubonisa ividiyo nge-interface esibonakalayo ukuze wenze ukuhlela nokuphatha amareyibrari amakhulu omculo umsebenzi olula futhi omnandi. Amanye amaseva afaka phezulu kwendlela yokulalelwayo yomsindo we-digital, okuguqula amaCD kumakhwalithi angu-24 aphilile futhi abanye bavumela uxhumano lwe-intanethi ukufinyelela kuzinkulungwane zeziteshi zomsakazo ze-intanethi kanye nezinsizakalo zokubhalisa umculo ezifana neRhapsody nabanye.
Kungani Unomculo Womculo?
Ngaphandle kwezinzuzo zokudlala umculo ngokufunwa ngaphandle kokulayisha i-disc kumdlali, iseva kuyindlela enhle yokugcina amanani amaningi omculo esikhaleni esincane kakhulu. Futhi kuyindlela engcono kakhulu yokuhlela nokuphatha iqoqo elikhulu lamarekhodi namarekhodi futhi ukwazi ukuwafinyelela ngokushesha. Kukhona ukwaneliseka okukhulu kokuba nomculo wakho wonke - kufana nokuhlanza nokuhlela igalaji lapho wonke amathuluzi esendaweni yakhe efanele futhi efinyeleleka kalula. Ukugcina imidiya yomzimba (ama-discs, amarekhodi kanye namathoni) kuseva yomculo ingenye yezinzuzo zokucabanga ngazo. Amaseva amaningi axhuma ku-inthanethi, akwazi ukufinyelela ezinkulungwaneni zeziteshi zomsakazo we-Inthanethi namanye amasevisi omculo we-inthanethi njengeRhapsody. I-server yomculo exhunywe kwisistimu ye-stereo noma yaseshashalazini isheshe iba ihabhu lomculo elinokufinyelela okusheshayo emthonjeni ongenamkhawulo womculo. I-server nayo iyindawo efanelekayo yomculo womculo womculo wonke. Ukudala uhlu lwadlalwayo lwendabuko lomculo ozithandayo ngokungangabazeki ukusetshenziswa okuthandwayo kwesiphakeli somculo.
Umculo wezinhlangano, ukudla okuthulile noma umculo omfushane wokulalela okulula nje izibonelo ezimbalwa zohlu lwadlalwayo olungadalwa nge-server yomculo.
Izibonelo zamaseva womculo
I-Olive 4HD: I-Olive 4HD inikeza isitoreji sama-20,000 amathrekhi womculo we-HD ku-24-bit high resolution. Ama-CD ajwayelekile avunyelwe bese ephakanyiswa ukusebenza kokungu-24-bit. I-Olive inezici eziphakeme ze-Burr-Brown DAC zokuthuthukisa okukhipha umsindo futhi ingasetshenziswa njenge- DAC yangaphandle . Kuyiphumelelo ye-HDMI evumela ukubukwa nokulawula iseva yomculo nge-display ekubukweni futhi uhlelo lungalawulwa ngohlelo lokusebenza lwe-Apple iPhone.
I-Meridian Sooloos Control 15: I-Control 15 iyinxenye eyodwa enhle kakhulu ne-disk drive ye-hard disk engu-500 GB yokugcina ama-CD angu-1 ku-format ye-audio engenalutho, idrayivu ye-CD yokukhipha ama-disk kanye nokubonisa okungu-17 "ngenethiwekhi yomsebenzisi enembile ukulawula uhlelo futhi uhlele ilabhulali yomculo. I-Control 15 ingakwazi ukuxhuma kumbili izikhulumi ze-Meridian DSP ngekhebula elilodwa noma lingasetshenziswa namanye amasistimu e-stereo noma yaseshashalazini.
I-NuVo Technologies Music Port: I-NuVo Music Port inganikela ngezindawo ezine zomsindo womculo womculo we-multiroom. Ingasebenzisa kokubili i-Windows Media Player namafomethi we-iTunes ngokuhlela umculo futhi ihlanganisa i-disk hard disk drive ye-320GB. Noma iyiphi ikhompyutha exhunywe ne-Music Port ingasetshenziselwa ukulawula uhlelo nge-interface yayo yomsebenzisi. Ingakwazi ukufinyelela iziteshi zomsakazo ze-intanethi futhi ingasetshenziswa nge-Sirius ne-XM yesiteshi se-satellite.
I-Escient Fireball SE-80 iMenenja Yomculo We-Digital: I-Escient Fireball SE-80 iyisisombululo se-music server esingabizi nge 80GB yesitoreji, umsakazo we-intanethi, ukusekelwa kwe-multi-zone, kanye nokusetshenziswa okulula ukusebenzisa. Nakuba i-80GB izwakala kancane, i-Fireball ingagcina umculo wamahora angu-538 ku-MP3 format (usayizi wefayela we-kbps 320) kufika kumahora angu-1345 ku-128 kbps usayizi wefayela, okwanele ukuqoqa umculo omkhulu.
I-Denon AVR-3311CI I-Receiver yasekhaya yaseKhaya - Iphrofayela yomkhiqizo
I-OPPO Digital BDP-103 I-Blu-ray Disc Player - Ukusebenza kwevidiyo
Sibutsetelo Se-PSB XA Dolby Atmos Yengeza Module Yesikhulumi
Yini Etholakalayo Ukuze Udlale ku-Blu-ray Disc Player?
Imibuzo Nezimpendulo Nge-Digital yangaphandle
Ukuthola Imenyu Yokwezifiso Buka futhi Uzwe Ezikhathini Zokuxhumana
I-Anthem MRX700 Receiver yasekhaya yaseshashalazini - Iphrofayela yezithombe
Indlela Yokuthumela Umsindo Ngaphezulu Kokuxhumana Kwamakhasimende Ekhaya
Indlela Yokuphila Amageyimu Wokusakaza Nge-Windows 10
Ukubukeza okuphezulu kwe-Mario
Indlela Yokwenza isipele noma Kopisha uhlu lwe-Outlook oluqediwe
Lalela Iziteshi Zomsakazo E-Inthanethi ngaphakathi kwe-Linux Usebenzisa i-Cantata
Kusho ukuthini Ukuqothula?
'Grand Theft Auto: I-Ballad ye-Gay Tony' Cheats ye-Xbox 360
I-20 Best Iphutha 404 amakhasi Ever
Awekho ama-CD ama-Patches nokuthi Ungayisebenzisa kanjani ekuGemeni
Ukubuyekezwa kwe-Apple TV 3
Indlela Yokwenza Izingcingo Zezwi Nevidiyo ku-Gmail naku-Google +
Ungakwazi Khipha iOS 7?
Ingabe i-Mac ingaxhumeka ku-PC?
21 Command Prompt Tricks kanye Hacks
Indlela Yokuvimbela Umthumeli ngekheli le-imeyili ku-Outlook Mail
Indlela nokuthi kungani kufanele usebenzise ama-Shades of Red in Design
Ukukhetha i-Amp Right for Car yakho noma Truck
Indlela yokulanda amavidiyo we-YouTube ku-iPhone yakho
Indlela Yokusetha Up i-iPod
Indlela Yokuthola Izinkinobho Zomkhiqizo we-Microsoft Office